Industrial Case – CTUM
Published by ctum at December 12, 2019
Myanmar Fortune Garment workers’ union is established democratically with 400 members.
Myanmar Fortune Garment workers’ union is estiblished democratically on 12-12-2019 with 400 members. အလုပ်သမား 400ကျော်ဖြစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည် ပြုလုပ်သည်နေ့ IWFMအဖွဲ့ချုပ်ရုံး ရိုးကြီးကျေးရွာ ထန်းတပင်မြို့နယ်။
မြန်မာဆူးမတ်ဝင်းဝင်းအထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား (၂၀၀၀)
English is below. အင်းစိန်မြို့နယ် တွင် ရှိသော မြန်မာဆူးမတ်ဝင်းဝင်းအထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား (၂၀၀၀) ခန့်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မြို့နယ် ညှိနှို်င်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်ပါ အချက်များအား လိုက်နာရန်နှင့် စက်ချုပ်၊ QC များကဲ့သို့ ထုတ်လုပ်မှုဆုကြေး မရရှိကြသော […]
Published by ctum at June 20, 2019
Dismissed three Chen Myanmar union leaders were reinstated on 21th May 2019. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီဘဲ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသော Chen Myanmar ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် (၃) ဦးအား IWFM/ CTUM ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် အလုပ်ရှင်မှ […]